Iimveliso abavelisi kunye nabanikezeli - iimveliso zehowuliseyili zeFektri
I-SARS-CoV-2 Umkhuhlane A & ...
Igama leMveliso SARS-CoV-2 / Umkhuhlane A & B Uvavanyo lwe-Antigen olukhawulezayo olusetyenziselwe i-2019 yenoveli ye-coronavirus Antigen yovavanyo lweSampuli yeNasopharyngea ...
Igama leMveliso I-COVID-19 yovavanyo olukhawulezayo lwe-Antigen （iLatex） Isetyenziselwa uvavanyo lwenoveli lwe-coronavirus ye-Antigen ye-2019 ye-specimen Oropharyngeal saliva / sput ...
Igama leMveliso I-COVID-19 yovavanyo olukhawulezayo lwe-Antigen (iColloidal Gold) isetyenziselwe i-2019 yenoveli ye-coronavirus Antigen yovavanyo lweSampuli yeNasopharyngeal Sw ...
Igama leMveliso I-COVID-19 yovavanyo lwe-Antigen ekhawulezayo (iColloidal Gold) isetyenziselwe i-2019 yenoveli ye-coronavirus Antigen yovavanyo lwe-Anterior Nasal Sw ...
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold) -Nasopharyngeal Swab
Uhlobo lwesampulu: Nasopharyngeal Swab
Ubuntununtunu obuphezulu kunye nokucaciswa. Ingasetyenziselwa ukuhlolwa kwangoko. Ukuququzelela izigqibo zonyango ngokukhawuleza;
Ilungele iimeko ezininzi: ukuvavanywa kweziko lonyango; Ukuvavanywa ngaphambi kokuqala kwakhona komsebenzi nesikolo, ukubeka esweni okokoko, njl.
Indlela yenyathelo elinye, kulula ukuyisebenzisa, ukunciphisa uhlolo oluphosakeleyo okanye olungelolwabangelwa ziimpazamo zomqhubi;
Zonke izinto eziyimfuneko kufuneka zibonelelwe kwaye Akukho zixhobo zifunekayo;
Inkqubo yokonga ixesha, iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-10;
Lobushushu Ukugcina: 2 ~ 30 ℃. Akukho zithuthi zithunyelwayo zibanda;
Ingcaciso: 1 uvavanyo / ibhokisi okanye 25 iimvavanyo / ibhokisi ；
Iimodeli zentsebenziswano ezahlukeneyo: I-OEM / i-ODM yamkelwe.
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold) -I-Anterior Nasal Swab
Uhlobo lwesampulu: Ngaphambili kwe-Nasal Swab
● Uhlobo lwesampulu: I-Nasopharyngeal Swab
● Ubuntununtunu obuphezulu kunye nokucaciswa. Ingasetyenziselwa ukuhlolwa kwangoko. Ukuququzelela izigqibo zonyango ngokukhawuleza;
● Umahluko phakathi kwe-Flu A & B kunye ne-coronavirus kuphela kwikhasethi enye yovavanyo kunceda ukubeka esweni ubhubhane we-coronavirus wehlabathi ngexesha lesifo somkhuhlane.
● Ilungele iimeko ezininzi: ukuvavanywa kweziko lonyango; Ukuvavanywa ngaphambi kokuqala kwakhona komsebenzi nesikolo, ukubeka esweni okokoko, njl.
● Zonke izixhobo eziyimfuneko ezinikiweyo kwaye akukho zixhobo zifunekayo;
● Inkqubo yokonga ixesha, iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-10;
● Ubushushu bokugcina: 2-30 ℃. Akukho zithuthi zithunyelwayo zibanda;
● Ukucaciswa: iimvavanyo ezingama-25 / ibhokisi;
I-COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) -iProbenmaterial vorderer Nasenabstrich
● Uhlobo lweSampulu: I-Anterior Nasal Swab, i-Sampling engaSebenziyo kunye nePuzzle;
● Kulula ukusebenza, ilungele usapho kunye novavanyo lomntu ngamnye lwe-COVID-19;
● Ukuzivavanya ngokwakho, ukujonga ngokwakho imeko yezempilo, ukufumanisa kwangoko, ukuzikhetha kwangethuba, unyango kwangoko;
● Ubuntununtunu obuphezulu, yenza umgca wokuqala wokhuselo lokuvavanywa kwe-COVID-19, ukunciphisa uxinzelelo lwamaziko onyango;
● Inkqubo yokonga ixesha, iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-15;
● Ukucaciswa: iimvavanyo ezi-5 / ibhokisi, uvavanyo olu-1 / ibhokisi;
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold) -iPostior Oropharyngeal Saliva
Uhlobo lwesampulu: I-posterior Oropharyngeal Saliva
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 olungathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (i-Fluorescence eyomileyo ye-Immunoassay)
● Isixhobo esisetyenzisiweyo: I-Jet-iStar 800 Analyzer / FIC-Q100 Analyzer okanye iJet-iStar 800Plus Analyzer;
● Uhlobo lwesampulu: Igazi elipheleleyo (Igazi eliyinyama okanye igazi elihlaba ngomnwe), i-serum okanye iplasma;
● Ubungakanani, ukufundwa ngokuthe ngqo komlinganiselo wokuthintela;
● Ukuchaneka: Ixabiso lokubuyisela liphakathi kwe-85.0% kunye ne-115.0% ；
● Inokusetyenziselwa uvavanyo lokuncedisa ngokusebenza kokugonya; Uncedisa kuphando lwezifo;
● Inkqubo yokonga ixesha, ixesha le-TAT: imizuzu eli-10
● Ukucaciswa: iimvavanyo ezingama-25 / ibhokisi; i-buffer ekhethiweyo ayikhethi
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 olungathathi cala kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (Colloidal Gold)
● Uhlobo lwesampulu: igazi liphela, i-serum okanye iplasma
● Ubuntununtunu obuphezulu kunye nokucaciswa.
● Ubungakanani obuninzi
● Ukucaciswa: iimvavanyo ezingama-25 / ibhokisi ；
● Iindlela ezahlukeneyo zentsebenziswano: I-OEM / i-ODM yamkelwe.
Iifayile ze-SARS-CoV-2 IgM IgG ye-Antibody Test (Colloidal Gold)
● Iziphumo kwi-10 ~ 15mins
● Uhlobo lwesampulu: Igazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma
● Gcina ngo 2 ℃ -30 ℃, ukuHamba ngokulula
● Ukuchonga ngaxeshanye ii-antibodies ze-IgG kunye ne-IgG ukunciphisa ubungozi bokuphoswa
● Akukho zixhobo zifunekayo, ezifanelekileyo ukuhlolwa kwendawo